Nhau - Hunhu kuongorora paKisimusi gore rega
Muvhiki yekutanga yaZvita, kuti tigamuchire kuuya kweKisimusi, Sincoheren Beijing fekitori yakatangawo kugadziriswazve kwechigadzirwa uye kuongorora kwehunhu kamwe pagore. Ikozvino kune vanopfuura makumi mashanu vane hunyanzvi mahunyanzvi mufekitori yeBeijing, uye mushandi wega wega anotevera Zvigadzirwa zvakagadzirwa Zvoga anoongorora, kuyedza, uye kuronga zvigadzirwa zvemidziyo.
Hunhu hwagara huri mweya weyekunaka michina, saka kuongororwa kweese chishongedzo uye kuomesa bvunzo yeese maitiro ekugadzira zvine hukama nehunhu hwemuchina wekupedzisira. Mishini yedu yese inozoongororwa yakasimba mhando isati yatumirwa. Chete kungoona kuti hapana matambudziko, ipapo anozotumirwa kune vatengi vedu.
Iyo fekitori ine yakasimba yemhando manejimendi manejimendi system, nekuti zvigadzirwa zvedu ndezvakanaka zviridzwa. Kune laser nezvimwe zviridzwa, vashandi vanofanirwa kupfeka zvipfeko zvakaomarara uye magirazi emalasi. Kune kuungana kwechiridzwa chega chega uye sikuruu yega yega, pachave neakakosha Yevashandi vanoita ongororo kuona kuti nhanho yega yega haigoni kukanganiswa
Director wefekitori achatora hesera yezvose zvigadzirwa, ndechipi chigadzirwa chine yakanyanya kutengesa vhoriyamu, ndechipi chigadzirwa chine yakanyanya kutadza chiyero, izvo zvinongedzo zvinoda kuvandudzwa, nezvimwe, kuti zvigadzirwa zvedu zvigone kusangana nemusika.
Iyo fekitori ikozvino ine yakazara chigadzirwa tambo, uye tambo yega yega inomhanya nekumhanyisa zuva nezuva. Iye zvino zvigadzirwa zvedu zvinonyanya kusanganisira diode laser, SHR IPL, Q Inoshandurwa Nd yag laser, CO2 laser, Cavitation RF, Kumashape, Coolplas Cryolipolysis, Hydrafacial, Emsculpt, HIFU, Oxygeneo, Pressotherapy, Plasma pen, nezvimwewo Pakati pazvo, diode laser, SHR IPL, CO2 laser uye Q Switched Nd yag laser inogamuchirwa neDFA uye TUV Medical CE, chimwe chigadzirwa zvakare chine CE.
Hunhu hunouya kutanga. Vatengi vedu vanobva kumativi ese epasi. Isu tinoshuvira kuti zvigadzirwa zvatinoburitsa zvinogona kuendeswa kune wese mutengi. Isuwo tinovimba kuti zvigadzirwa zvedu zvinogona kuunza bhizinesi rakanaka kune vatengi vedu.